China 5oz woozy na-ekpo ọkụ ihendori efu karama iko na okpu na dripper na mekotaonwe gbalaga rụpụta na Factory | Mgbapu
5oz woozy na-ekpo ọkụ ihendori efu karama iko na okpu na dripper na Ada Ada gbalaga
Ihe ndị a na-enweghị ihe ọ hotụ sauceụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ na-ekpo ọkụ dị mma maka arịa calorie gị! Site na dashboard n'elu, ha zuru oke maka ịchekwa na ijere ihendori na-ekpo ọkụ. E mere ka karama ahụ nwee iko doro anya ma nwee okpu ojii / ọbara ọbara. Otu karama dị mfe dị mma maka ụlọ na azụmaahịa, yana nwekwara ike ịnye ndị na-azụ ahịa n'ụlọ ọrụ na ụlọ oriri na ọ andụ seasonụ oge na oge.
5oz woozy na-ekpo ọkụ ihendori efu karama iko na okpu na ịda mbà gbalaga
Ihe iko ocha nke ozo nke ozo ise ozo na ihe nkedo ahihia bu ihe eji echekwa nri nke oma ma di nma. Nkọwa ogologo na warara nke kalama pụtara na ọ dị mfe ijikwa ma kesaa ọdịnaya ahụ. N'otu oge, iko iko na-enye ndị ahịa gị ohere ịhụ ngwaahịa ha chọrọ ịzụta, nke bara ezigbo uru iji hụ na ndị ahịa dị mma! Na mgbakwunye, elu dị larịị na-eme ka ọ dị mfe itinye akara mmado. Kalama ahụ nwere ntinye reducer iji chịkwaa mgbasa nke ọdịnaya.
Anyị karama iko bụ nnukwu containers maka mmanụ, mmanya, sauces na sizinin. Naanị tinye akara na karama kalama iji nye ndị ahịa gị ihe ọmụma na ihe nfụkasị ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ire ngwaahịa a, a ga-eji karama a mee ihe na kichin, ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ ahịa kọfị, nnukwu ụlọ ahịa na ụlọ ahịa nri ụtọ.
3oz / 8oz ikike dịkwa
MOQ bụ nkeji 10,000
Ego metụtara na nnukwu ịzụrụ
Mere nke dị elu soda lime iko ihe onwunwe
Nke gara aga: Omenala iko senti karama dum set soplaya na China
Osote: 32oz 1000ml iko Mason nchekwa canning ite na ọlaọcha ịghasa metal mkpuchi
Karama Ihe onunu karama
Karama mmanya karama na ite
Glass Beverage Botụ N'ogbe
Iko ihe ọiceụ Glassụ iko
Glass Juice Bottles N'ogbe
Bọọlụ Soda Botụ
8oz 250ml ogologo kwadoro iko gburugburu ite na w ...
32oz 1000ml iko Mason nchekwa canning ite bú ...
2oz 60ml red chilli ose na-ekpo ọkụ ihendori iko N'ala ...
25oz 750ml cylinder gburugburu iko echebekwa ite ...
1.5oz 45ml Mini hexagonal Clear Glass ite maka H ...
Clear Glass mgbapụta karama, Glass Ude mmiri iko na mgbapụta, Glass mgbapụta karama N'ihi mkpa mmanụ, Iko karama na ịgba nfuli, Glass mgbapụta karama N'ihi ncha ntutu, Glass kalama na mgbapụta Dispenser,